I-non-Hodgkin lymphoma Archives - I-US Ilungele Ukwazi
IBayer icela inkantolo yokudlulisa amacala ukuthi iphinde isike umklomelo wokulimala we-Roundup okweletwa umgcini wezindawo zaseCalifornia onomdlavuza
Posted on August 5, 2020 by UCarey Gillam
UBayer ucela inkantolo yokudlulisa amacala eCalifornia ukuthi inciphise u- $ 4 million kusuka enanini lemali elikweleta umgcini wezinkundla zaseCalifornia onenkinga yokuphila nomdlavuza owatholwa yinkantolo yecala eyadalwa ukutholakala kwale ndoda emithini yokubulala ukhula i-Roundup kaMonsanto.
Kwi "isicelo sokulalelwa kabusha”Ufake uMsombuluko eNkantolo Yokudlulisa Amacala yesiFunda Sokuqala Sokudlulisa Amacala eCalifornia, abameli beMonsanto nomnikazi wayo waseJalimane uBayer AG bacele inkantolo ukuthi yehlise isamba esisuka ku- $ 20.5 million siye ku- $ 16.5 million womonakalo owanikezwa uDewayne“ Lee ”Johnson.
Inkantolo yokudlulisa amacala "ifinyelele esinqumweni esiyiphutha ngokuya ngephutha lomthetho," ngokusho kokufakwa kukaMonsanto. Udaba luguquka ngokuthi kulindeleke ukuthi aphile isikhathi eside kangakanani uJohnson. Ngenxa yokuthi ubufakazi ecaleni lathola ukuthi uJohnson wayelindelwe ukuthi aphile “kungadluli iminyaka emibili,” akufanele athole imali yezinhlungu zesikhathi esizayo nokuhlupheka okwabiwe isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili - yize eqhubeka nokuphila ukubikezela, inkampani iyaphikisana.
Ngaphansi kwezibalo ezicelwe yiMonsanto, inkantolo kufanele isike kusuka ku- $ 4 million kuya ku- $ 2 million inani eli-odelwe ukulinyazwa okungekho komnotho esikhathini esizayo, (ubuhlungu nokuhlupheka.) Lokho kunganciphisa umonakalo jikelele wenhlawulo (owedlule nowesikhathi esizayo) uye ku- $ 8,253,209. Ngenkathi usagcizelela ukuthi akufanele ikweletwe noma yimuphi umonakalo wokujeziswa, uma kukhishwa imijeziso yokujeziswa kufanele ithunyelwe ngaphandle kwesilinganiso esingu-1-to-1 uma kuqhathaniswa nesinxephezelo, okuletha ingqikithi ku- $ 16,506,418, uMonsanto uphikisa ekufayeleni kwayo.
Ekuqaleni uJohnson wanikezwa amaRandi ayizigidi ezingama-289 ngamajaji ngo-Agasti 2018, okwamenza waba ngummangali wokuqala ukuwina ezingeni lecala ngenxa yezimangalo zokuthi ukutholakala kwemithi yokubulala ukhula esuselwa eMonsanto glyphosate kubangela i-non-Hodgkin lymphoma nokuthi iMonsanto ifihle izingozi. Ijaji eliqulile icala lehlise lo mklomelo waba ngama- $ 78 million. IMonsanto idlulise icala ifuna ukulingwa okusha noma umklomelo owehlisiwe. UJohnson wadlulisa icala efuna ukubuyiselwa umklomelo wakhe ophelele womonakalo.
Inkantolo yokudlulisa amacala ubuse ngenyanga edlule ukuthi kunobufakazi "obuningi" bokuthi i-glyphosate, kanye nezinye izithako kumikhiqizo ye-Roundup, yimbangela yomdlavuza kaJohnson. Futhi inkantolo ithole ukuthi "kwakukhona ubufakazi obuqand 'ikhanda bokuthi uJohnson wahlupheka, futhi usazoqhubeka nokuhlupheka impilo yakhe yonke, ubuhlungu obukhulu nokuhlupheka."
Kodwa inkantolo ithe umonakalo kufanele wehliswe ube yisamba esingu- $ 20.5 million ngenxa yenkinga yokuphila isikhathi esifushane kukaJohnson.
Ngokuhambisana nesidingo sayo sokwehliswa okuthe xaxa komonakalo, iMonsanto icela inkantolo yokudlulisa amacala ukuthi inikeze ithuba lokulungiselela kabusha "ukulungisa ukuhlaziywa kwayo" nokuthi "iguqule isahlulelo ngezinkomba zokungena esahlulelweni
eyeMonsanto noma, okungenani, shiya umklomelo womonakalo wokujeziswa. ”
Icala likaJohnson limbozwe abezindaba emhlabeni jikelele futhi lafaka obala imizamo kaMonsanto yokukhohlisa irekhodi lesayensi ku-glyphosate ne-Roundup nemizamo yalo yokuthula abagxeki nokuthonya abalawuli. Abameli bakaJohnson banikeze ama-jurors ama-imeyili enkampani yangaphakathi namanye amarekhodi akhombisa ososayensi baseMonsanto bexoxa ngamaphepha esayensi abhala ghost ukuze bazame ukuxhasa ukusekelwa kokuphepha kwemikhiqizo yenkampani, kanye nezinhlelo zokuxhumana ezinemininingwane yokuhlambalaza abagxeki, nokuqeda ukuhlolwa kukahulumeni ubuthi be-glyphosate, ikhemikhali eliyisihluthulelo emikhiqizweni kaMonsanto.
Izenzo zikaBayer zokunciphisa imiklomelo yemiklomelo yokulahleka kwecala likaMonsanto kuza njengoba inkampani ifuna ukukhokhela izimangalo zomdlavuza we-Roundup ezingaba ngu-100,000 XNUMX ezisalinde i-United States ezinkantolo ezehlukene. Abanye abamangali abajabule ngokuhlala imigomo, futhi basabisa ngokungavumi ukuthengiselana.
Isenzo ekudlulisweni kwesikhalazo sePilliod
Esenzweni esihlukile sokudluliswa kwamacala esihlobene nokuqulwa kwamacala eRoundup, ngesonto eledlule abameli baka-Alva no-Alberta Pilliod wafaka isikhashana icela inkantolo yokudlulisa amacala eCalifornia ukuthi i-oda imivuzo yemiklomelo yabashadayo isamba esingu- $ 575 million. Lezi zithandani esezikhulile - zombili ziphethwe umdlavuza obuthakathaka ezisola ngokuvezwa yiRoundup - zithole ngaphezu kuka- $ 2 billion ngesikhathi kuqulwa icala, kepha ijaji lecala bese wehlisa umklomelo wejaji kuya ku- $ 87 million.
Ukushaywa komklomelo womonakalo kwakweqile, ngokusho kwabameli abamele lezi zithandani, futhi akujezisi ngokwanele uMonsanto ngokona kwayo.
"Amajaji amathathu aseCalifornia, amajaji amane okuqulwa kwamacala, namajaji amathathu okudluliswa kwamacala ababuyekeze ukungaziphathi kahle kukaMonsanto bavumelane ngazwi linye ukuthi kukhona" ubufakazi obuningi bokuthi uMonsanto wenza ngokunganaki nokuphepha ukuphepha kwabanye ngamabomu, "kusho umbiko kaPilliod. "Isimangalo seMonsanto sokuthi iyisisulu" sokungabi nabulungisa "kulokhu sizwakala siyize ngenxa yalokhu okutholwe ngazwi linye futhi okuphindaphindiwe."
Abameli bacela inkantolo ukuthi inikeze isilinganiso semali engu-10 kuya ku-1 yomonakalo wesijeziso kumonakalo wokukhokha.
"Izisulu zangempela zokungabi nabulungisa kuleli cala yiPilliods, bobabili abahlaselwe yisifo esibuhlungu futhi esiqeda amandla ngenxa yokungahambi kahle kukaMonsanto," kusho lo mfushane. "Ijaji, ekunqumeni ukuthi izakhamizi ezihloniphekile akudingeki zikubekezelele ukuziphatha okuyihlazo kukaMonsanto, liphethe ngokufanele ukuthi kungumonakalo omkhulu wokujeziswa kuphela ongajezisa futhi uvimbele iMonsanto."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, California, umdlavuza, inkantolo, UDewayne "Lee" Johnson, EPA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, imithetho yamafemu, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, i-non-Hodgkin's lymphoma, izibulala-zinambuzane, UPilliod, RoundUp, isayensi, ukuhlala
Abamangali besifo somdlavuza baseRoundup balinde ngabomvu izindaba zokuhlala
Posted on June 11, 2020 by UCarey Gillam
Izinkulungwane zeziguli ezinomdlavuza nemindeni yazo ezungeze i-United States zaziswe kuleli sonto ukuthi kufanele kumenyezelwe isinqumo esiphelele sezimangalo zabo ababebhekene neMonsanto Co yangaphambili ngaphambi kokuphela kwenyanga.
Yize inani elithile lokukhokhwa kwabamangali lisazobekwa, amaqembu abamangali atshelwe ukuthi alindele imininingwane yesivumelwano sezimali esizomenyezelwa esidlangalaleni ngaphambi komnqamulajuqu kaJuni 30 obekelwe ukuqeda izingxoxo zonyaka wonke. Zonke izinsolo bakha i-non-Hodgkin lymphoma ngemuva kokuchayeka kumuthi wokubulala ukhula osuselwa eMonsanto's glyphosate-based, njenge-Roundup. Baphinde basola ukuthi inkampani ibazi ngobufakazi besayensi obukhombisa izingozi zomdlavuza ezihambisana nemikhiqizo yayo, kepha yasebenza ukucindezela imininingwane ukuvikela inzuzo yayo.
Abameli bomnikazi weMonsanto uBayer AG kanye nabameli abamele abangaphezu kuka-50,000 XNUMX babamangali babambe iqhaza ezingxoxweni eziphikisanayo, zokuqala nokuma mayelana nokuxazululwa kwezinyanga ezimbalwa, kuphazamisa imindeni edonsa kanzima ngokwezimali nangokomzwelo ngezinkinga zokulwa nomdlavuza.
Abamangali abaningi balahlekelwe yimisebenzi namakhaya njengoba besebenza ngezindlela ezibiza kakhulu zokwelashwa komdlavuza kanti abanye bafe besalinde ukuxazululwa kwamacala abo, amarekhodi asenkantolo akhombisa. Isaziso se- ukufa kommangali onjalo yenziwe enkantolo yenhlangano eseSan Francisco ngoJuni 1.
Amafemu amaningi ahola phambili anezikhalazo ezinkulu avumile ngemibandela yesivumelwano esifuna ukuthi u- $ 8 billion- $ 10 billion akhokhwe yiBayer ngenhloso yokuthola isivumelwano sokuthi lawo mafemu ngeke afake izicelo ezintsha zomdlavuza kule nkampani, ngokusho imithombo esondelene necala.
Inani lemali ummangali ngamunye alitholayo lizoncika ezintweni eziningana. Izindawo zokuhlala kulindeleke ukuthi zihleleke ngakho-ke ngeke zikhokhiswe intela kwabamangali.
Ezinye izinkampani zabameli ezinabamangali bakwaRoundup kusamele ziphothule isivumelwano, futhi imihlangano yokuxazulula ubusaqhubeka ngesonto eledlule, kufaka phakathi nenkampani ezinze eLouisiana ePendley, Baudin & Coffin, ngokusho kwemithombo esondelene necala.
Okhulumela iBayer uChris Loder ngeke asiqinisekise isikhathi noma imigomo yanoma yisiphi isimemezelo, ethi kuphela ukuthi inkampani seyenze inqubekela phambili ezingxoxweni kodwa "ngeke aqagele ngemiphumela yezindlu noma isikhathi."
Uthe noma yisiphi isixazululo kufanele sibe "nesilinganiso sezezimali" futhi sinikeze "inqubo yokuxazulula amacala angaba khona esikhathini esizayo."
IBayer, eyathenga iMonsanto ngoJuni ka-2018, ibilokhu ifuna ukuqeda udaba lwamacala amakhulu olwehlise isitokwe senkampani, lwakhuthaza izinxushunxushu zabatshalizimali, futhi lwabeka nokuziphatha okungabazekayo kwezinkampani emphakathini. Izilingo ezintathu zokuqala zaholela ekulahlekelweni kwemiklomelo yeMonsanto neyamajaji okungaphezulu kwama- $ 2 billion, yize amajaji wecala kamuva ayinciphisa kakhulu imiklomelo. IMonsanto idlulise ukulahlekelwa ngakunye kwalokhu okuthathu futhi manje ilinde isinqumo sokwedluliswa kwesinqumo ecaleni lokuqala - UJohnson v. Monsanto - ngemuva kwe- Juni 2 ukuphikisana ngomlomo.
Yize kube nezingxoxo zokuxazulula izinkinga, inqubo yasenkantolo ibilokhu iqhubeka ngamacala amaningi. Kusanda kudluliswa amacala asuka ezinkantolo zombuso aya ezinkantolo zombuso ze-Roundup enkantolo yase-US District for the Northern District of California eSan Francisco. Futhi abameli beBayer bebelokhu bematasa befaka izimpendulo zabo ezinkantolo.
Edolobheni laseSt. Louis, Mo., idolobha lasekhaya lakudala likaMonsanto, icala likaTimothy Kane v. Monsanto linenkantolo yokulalelwa kwesimo ngoJuni 15 kanti icala lejaji lizoqala ngoJuni 29. Futhi yize kubonakala kungenakwenzeka Icala lizoqhubeka, ngoLwesithathu abameli balesi sikhondlakhondla samakhemikhali bafaka isicelo sokukhipha ubufakazi bokuthi omunye walabo bafakazi bamangalelwa.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, Bayer, umdlavuza, izinkantolo, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, RoundUp, i-San Francisco, isayensi, izilingo, umbulali wokhula
Ukufakwa okusha kwezomthetho mayelana nezingozi ezisolwa nge-Roundup phakathi kokubambezeleka kwenkantolo kwe-coronavirus
Posted on Mashi 24, 2020 by UCarey Gillam
Noma ukusabalala kwe-coronavirus kuvala iminyango yenkantolo emphakathini nakubameli, ukuqhutshwa kwezomthetho kuyaqhubeka ngaphezu kwezimangalo zengozi ehlobene nokubulala ukhula okususelwa e-glyphosate okusekelwe eMonsanto.
Amaqembu amabili wokungenzi inzuzo, i-Center for Food Safety (CFS) kanye ne-Center for Biological Diversity (CBD), wafaka isikhashana i-amicus egameni lesiguli somdlavuza u-Edwin Hardeman ngoMashi 23. UHardeman uzuze isinqumo sejaji ngokumelene neMonsanto se- $ 80 million ngo-Mashi ka-2019, eba ngummangali wesibili owinile ecaleni le-Roundup. Ijaji lecala lanciphisa umklomelo wejaji laba ngu- inani lama- $ 25 million. IMonsanto idlulise umklomelo nokho, ebuza inkantolo yokudluliswa kwamacala ukuguqula isinqumo.
Isifinyezo esisha somthetho esisekela izibalo zikaHardeman eyodwa efakwe yi-Environmental Protection Agency (EPA) esekela iMonsanto ekudlulisweni kwesicelo sikaHardeman.
Isifinyezo se-CFS kanye ne-CBD sithi iMonsanto ne-EPA bobabili abalungile ukuthi bagunyaze ukuthi ukuvunywa kwe-EPA kwe-glyphosate herbicides kuvimbela izinselelo ekuphepheni kwemikhiqizo:
"Ngokuphikisana nalokho okushiwo nguMonsanto, icala likaMnu Hardeman alincishiswa yisiphetho se-EPA maqondana ne-glyphosate ngoba iRoundup iyindlela yokwakheka kwe-glyphosate i-EPA engakaze iyicubungulele ubucayi. Ngaphezu kwalokho, amaphutha amakhulu nokubandlulula kulimaze ukuhlolwa kwe-EPA mayelana ne-glyphosate's carcinogenicity kanye nenkantolo yesifunda kwakuqinisile ngokuvumela ubufakazi balokho, ”kusho umfishane.
"IMonsanto ifuna leNkantolo ikholelwe ukuthi" i-glyphosate "iyafana ne-'Roundup. ' Isizathu silula: uma la magama eguquguquka, bayaphikisana, ukuthola kwe-EPA ukuthi i-glyphosate "akunakwenzeka ukuthi ibangelwe yi-carcinogenic" izosebenza ku-Roundup futhi ingahle ilalele icala likaMnu Hardeman. Kodwa-ke njengoba ubufakazi obethulwe ecaleni bekhonjisiwe, "i-glyphosate" ne "Roundup" kakhulu azifani, kanti i-Roundup inobuthi obukhulu kune-glyphosate. Ngaphezu kwalokho, i-EPA ayikaze ihlole i-Roundup ye-carcinogenicity. Ukwakhiwa kweGlyphosate, njenge-Roundup, kuqukethe izithako ezingeziwe (ama-co-formulants) ukwenza ngcono ukusebenza ngandlela thile. I-EPA iyaqonda ukuthi ukwakheka okunobuthi kune-glyphosate kukodwa, kepha nokho kugxile ekuhloleni komdlavuza wayo ku-glyphosate emsulwa… ”
Hlukanisa amagama enkantolo e-EPA
Kwisenzo somthetho esihlukile, ngesonto eledlule isikhungo sokuphepha kokudla sifake isimangalo kuhulumeni mayelana ne-EPA ngokuqhubeka nokuxhaswa kwe-glyphosate. Isimangalo esenziwe egameni lomfelandawonye wabasebenzi basemapulazini, abalimi kanye nabalondolozi bemvelo, sithi i-EPA yephula umthetho iFederal Insecticide, Fungicide, neRodenticide Act kanjalo ne-Endangered Species Act ngokuqhubeka nokuvumela ukusetshenziswa kabanzi kwemithi yokubulala ukhula i-glyphosate.
"Ngenkathi i-EPA ivikela i-glyphosate, amajaji emajele ambalwa ayitholile ukuthi idala umdlavuza, ikhipha isinqumo esivuna labo abathintwe ukuvezwa," kusho iCFS ekukhulumeni nabezindaba. “Izinhlobo zeGlyphosate ezifana neRoundup nazo zisungulwe kahle njengezinemithelela eminingi kwezemvelo. Ngemuva kwenqubo yokubukezwa kokubhaliswa ethathe isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi, i-EPA yavumela ukumaketha okuqhubekayo kwezibulala-zinambuzane naphezu kokuhluleka kwe-ejensi ukuhlola ngokugcwele amandla okuphazamisa i-hormone ka-glyphosate noma imiphumela yayo ezinhlotsheni ezisongelwayo nezisengozini yokuqothulwa. ”
UBill Freese, umhlaziyi wenqubomgomo yesayensi kwaCFS uthe: "Kunokuthintana 'nesayensi engcono kunazo zonke,' njengoba kusho i-EPA, le nhlangano ithembele cishe ngokuphelele ezifundweni zeMonsanto, ikhetha imininingwane ehambisana nenhloso yayo futhi ichitha yonke eminye."
Ukuphazamiseka kwenkantolo okuhlobene negciwane
IMonsanto nomnikazi wayo waseJalimane uBayer AG bebelokhu bezama ukuzama ukulungisa inani elikhulu lamashumi ezinkulungwane zezimangalo zomdlavuza weRoundup zilethwe ezinkantolo zase-US. Lowo mzamo uyaqhubeka, futhi izindawo zokuhlala ezithile sezivele zitholakele kubamangali abathile, ngokusho kwemithombo ethintekayo ezingxoxweni. I-US Ilungelo Lokwazi kubika ekuqaleni kukaJanuwari ukuthi amaqembu abesebenzela ukukhokhela cishe ama- $ 8 billion kuya ku- $ 10 billion.
Kodwa-ke, amanye amacala amaningi ayaqhubeka nokusebenza ngendlela yohlelo lwenkantolo, kufaka phakathi isikhalazo sikaDewayne “Lee” Johnson, ummangali wokuqala ukuwina iMonsanto ecaleni laseRoundup. Abameli bakaJohnson babenethemba lokuthi iNkantolo yokuDluliswa kwamaCala yaseCalifornia izobamba izingxoxo zomlomo uma uMonsanto edlulisa isinqumo sokuthi uJohnson anqobe ngo-Ephreli. Kepha lokho manje kubonakala kunethuba elikhulu njengoba amanye amacala ahlelelwe uMashi manje esefakwa ku-Ephreli.
Futhi, zonke izikhathi zokuzibonela mathupha zezimpikiswano zomlomo enkantolo yezikhalazo njengamanje zimisiwe. Umeluleki okhetha ukwethula impikiswano ngomlomo kumele akwenze lokho ngocingo, kusho inkantolo.
Khonamanjalo, izinkantolo ezifundeni eziningi zaseCalifornia zivaliwe futhi amacala amajaji amisiwe ukuzama ukuvikela abantu ekusakazekeni kwaleli gciwane. Inkantolo yombuso eSan Francisco, lapho kuphakathi kwamacala amaningi we-Roundup, ivaliwe emphakathini, kufaka phakathi ukumiswa kwamacala, kuze kube nguMeyi 1. Abahluleli basengakhipha izinqumo, noma kunjalo, futhi babambe ukulalelwa ngocingo.
EMissouri, lapho iningi lamacala ezinkantolo zombuso i-Roundup asuselwa khona, zonke izinqubo zamacala enkantolo (ngaphandle kokumbalwa) zimisiwe ngo-Ephreli 17, ngokusho kweNkantolo eNkulu yaseMissouri oda.
Elinye icala laseMissouri ebelizongena enkantolo ngoMashi 30 eNkantolo yaseSt. Louis City manje linosuku lokuqulwa kwecala elibekelwe u-Ephreli 27. Leli cala nguSeitz v Monsanto # 1722-CC11325.
Ukuyala ushintsho, iJaji uMichael Mullen ubhale wathi: “NGENXA YOMBANGO KAZWELONKE WE-COVID-19 VIRUS KANYE NOKUTHOLAKALA KWAMAJOROR KULESI SIKHUNGO INKANTOLO EBHEKILE ISUSA LELI CALA KUMATSHI 30, 2020 ICALA LOKUZAMA. IZIMBANGELA ZIHLELELWE UMHLANGANO WOKUHLELWA KOKULINGA NGOMSOMBULUKO, APRILI 27, 2020 @ 9:00 AM. ”
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, izinkantolo, EPA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, ukhula, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, umbulali wokhula, ukhula